Puntland oo ka dhagax dhigtay magaalada Qarxis dugsi sarre cusub. – DMS
[ 5th January 2022 ] Order Floxin Online Usa. No Prescription Floxin Generic	Wararka
[ 5th January 2022 ] Cheapest Place To Buy Lioresal	Wararka
HomeWararkaPuntland oo ka dhagax dhigtay magaalada Qarxis dugsi sarre cusub.
23rd October 2019 admin1
Wafti uu hogaaminayo Wasiirka Wasaarada Waxbarashada iyo Tacliinta sarre ee Dowladda PUNTLAND ayaa maanta lagu soo dhaweeyay deegaanka Qarxis oo ka tirsan Gobolka Nugaal ka dib markey halkaas u tageen waftiga Wasiirku daahfur loo samaynayo mashaariic dhawr ah oo ay daadihinayso hay,adda Care International.
Wasiir Cabdulaahi ayaa dhagax dhigey dhismaha dugsiga sarre cusub oo ay yeelanayso magaalada Qarxis,islamarkaana qeyb ka ah mashruuca waxbarashadu waa Iftiin oo ay maalgaliso isu-taga midowga Yurub.
Mashruucaan oo taageeraya illaa dhismaha 12 dugsi hoose iyo 4 dugsi sare oo laga hirgalinayo deegaanada ka baxsan ama ka yara durugsan laamiga ayaa sidoo kale dayactir iyo qalabayn loogu samayn doonaa illaa 80 iskuul oo isugu jira dugsiyo hoose/dhexe iyo sarre.
Mashruuca waxbarashadu waa Iftiin oo horaantii sanadkaan daahfur loogu sameeyay magaalada Garowe waxaa uu socon doonaa muddo saddex sano ah,waxaana ku baxaya adduun lacageed oo gaaraya 7 milyan oo dollar,ahmiyaddiisuna waxay la xidhiidhaa sidii kor loogu qaadi lahaa tayada waxbarashada iyo kobcinta tirada ardayda.
Wasiirka Wasaarada Waxbarashada Puntland ayaa dhagax dhigay dhismaha dugsi sare oo laga dhisayo magaalada Qurxis.Dugsiga sarre ee Qurxis oo ay dhisayso hay'ada Care waxaana dhaqaalaha ku baxaya bixinaya Midowga Yurub wuxuuna Qayb ka yahay mashruuca Waxbarashadu waa Iftiin.Mashruucan waxbarashadu waa iftiin ayaa soconaya mudo 3 sano ah waxaana lagu dhisayaa 12 Dugsi Hoose iyo 4 Dugsi Sare oo cusub, halka dayactir iyo qalabayn lagu samayn doono 50 dugsi hoose ah iyo 30 Dugsi Sare.
Posted by Dalmar Media Services on Wednesday, 23 October 2019
Shacabka magaalada Qarxis ayaa si weyn usoo dhaweeyay Wasiirka Waxbarashada, Agaasimaha guud ee Wasaaradda iyo Saraakiil ka socotay hay,adda Care International oo maalgalinaysa dhaqaalaha ku baxaya dhismaha Iskuulka laga dhagax dhigay magaalada Qarxis.
Shaqo banaan dowlada hoose Garoowe Agaasimaha Dakhliga iyo Canshuuraha